(မှတ်ချက်။ ။အောက်ဖော်ပြပါ စာစုသည် AM ၏ အာဘော် လုံးဝ မဟုတ်ပါ။ Facebook user တစ်ဦး၏ Note တစ်ခုကို သဘောကျ၍ ပြန်လည် ကူးယူ ဖော်ပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။)
တစ်နေ့သောအခါသာမယ ညအခါကလာတွင် ကျွနုပ်သည် ပျင်းပျင်းရှိသည်ဖြစ်သဖြင့် ကွန်ပျူတာကိုဖွင့် နားကိုစွင့်ကြည့်လိုက်ရာ အကျွနုပ်၏ အခန်းဖော်ဖြစ်သူသည် ယနေ့ညတွင် စပိန်မှ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဟု တစ်ကမ္ဘာလုံးက သတ်မှတ်ထားသော အသင်းနှင့် ( တစ်ခြားဂြိုဟ်သားတွေသာ ဘောလုံးကန်ရင် ဘာစီလိုနာ ကိုရှောင်သွားကြမယ်ထင်သည်. ဤကားစကားချပ်) ပိုလီယိုဆန်ဆန် ကစားတတ်သော လိမ်ဖယ်လိမ်ဖယ်နှင့် ကန်တင်ပြေး စုပြုံလိုက် ခြေဖျားနှင့်ထိုးလျှင် တွတ်ပီကဲ့သို့ မထင်သလို ဟိုထိဒီထိ ဂိုးသွားတတ်သော ဒိုင်ကူမန်ယူဟု အများကပြောကြသည့် အသင်းနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြမည်ဖြစ်ကြောင်း မစားရ၀ခမန်း ကသန်းကယန်းနှင့် စိုးရိမ်သောမျက်ဝန်းနှင့် လာပြောနေသည်။ သို့ဖြစ်သဖြင့် ကျွနုပ်လည်း ဒီအသင်းနှစ်သင်း ဘယ်လိုများကန်မလဲဟူသော စိတ်သည် အကျွနုပ်ကို နှိူးဆွလာသည်ဖြစ်၍ မကြည့်ချင်ကြည့်ချင်နှင့် ထိုင်ကြည့်ဖြစ်သည်။ သိူ့သော်အကျွနုပ်၏စိတ်ထဲတွင် ဒိုင်ကူများဘက်မှ သီဆိုမည့်သီချင်းလေးကို တွေးကြည့်ရာ စိုင်းစိုင်မော့ဝ် သီချင်းလေးထွက်လာသည်။ ...မဖြစ်နီုင်းသိပါရက်နဲ့ သူ့ကိုပင် ...ချန်ပီယံဖလားလေးကိုမှ ....ဒိုင်ကူကလိုချင်... အစမှာ ဘာကာနဲ့မတွေ့ခဲ့ကြရင် အကောင်းသားပေါ့ထင်...ကို့မှာသူတို့ ကန်တာများတော့ စိတ်မှာ ကြောက်အားဝင်.....။
နှစ်ဘက်အသင်းသားမှားကွင်းထဲဝင်လာသည်ကို တွေ့ရပါသည်. လက်ဆွဲနှူတ်ဆက်ကြ ထို့နောက် အသီးသီးနေရာယူကြသည်။ ထိုအထဲတွင် ကျွနုပ်သတိထားမိသည်ကား lionel messi ဆိုသည့်ကောင်ကလေးပင်ဖြစ်သည်။ သူ၏လူကောင်မှာ အင်မတန်သေးကွေးလှပေသည်။ သူကလေး ဘယ်လိုများကစားဦးမလဲဆိုသည်းစိတ်သည် ကျွနုပ်၏ရွေဘ၀င်ကို မရိုးမရွဖြစ်စေသည်။ ပွဲစသည်နှင့် မန်ယူဘက်မှ ဟိုပေးဒီပေး စလုပ်လာသည်ကို တွေ့ရသည်။ တောင်ကန် မြောက်ကန် ကန်သည် ။ မျောက်လိုလိုအကောင် နဖူးပြောင်ပြောင်နှင့် အကောင်ဆီကို ဂိုးသမား က ကန်တင်ပေးသည် . မျေက်လိုလိုကောင်က ပြေးလိုက်သည်။ ဂိုးသမားတက်ပုတ်သည်။ ဂိုးသမားသည် ဆိုက်ကားသမား မဟုတ်သောကြောင့် အသာလေး ကာကွယ်နိုင်သည်။ မန်ယူ ပေးသည်. ယူသည်. အပေးအယူလုပ်နေသည်. ဘယ်သူ့ကိုပေးရမှန်းမသိသဖြင့် တွေ့ရာလူကိုကိုပေးသည်. ဘာကာက ဖိန့်နဲ့လိုက်သည်။ ဟိုကန်ဒီကန်ကန်သည် မရပါ ။ ဘာကာနောက်တန်းသည် တရုတ်ပြည်မှ မဟာတံတိုင်း ကွင်းထဲရောက်နေသလား ထင်မှတ်ရလောက်အောင် ကာကွယ်နိုင်သည်. မန်ယူရှေ့တန်းတွေ တိုးမပေါက် . ခွေးတိုးပေါက်လိုက်ရှာသည်. မတွေ့ .ထို့ကြောင့် ကျော်တက်ရန်စဉ်းစားသည်. မဖြစ်နိုင် . ထို့ကြောင့်သူတို့တွေ အတော်စိတ်ဓာတ်ပျက်သွားပုံရသည် .နောက်ဆုံးတော့ မန်ယူအသင်းသားများ လူစုံအောင်ဘောလုံး မထိလိုက်နိုင်ခင် ဘောလုံးက ဘာကာ ကစားသမားတွေ ခြေထဲ အလိုလိုသက်ဆင်းလိုက်ရလေတော့သည်....
ဒီလိုနဲ့ဘာကာတို့ ကစားကွက်အတိုင်း အနီးကပ်ပေး အဝေးဖြန့်ပေး ဘယ်လိုပေးပေး ကြည့်လို့ကိုကောင်းနေတော့သည် ...ပက်ကျိလိုကောင်လေးသည် အစပိုင်းတော့ ခွေးရူးလုပ်တမ်းကစားသည် အထင်နှင့် လိုက်လုကြည့်သည်.. ဘာကာကစားသမားတွေသည် ဤသည်မှာ ခွေးရူးကစားနေခြင်းမဟုတ် အလှူအိမ်လည်း မဟုတ်ကြောင်း အရမ်းကာရော လိုက်မလုဖို့ နည်းနည်းလောက်အကြောင်းသိအောင် ကွင်းထဲတွင် ပတ်ပြေးခိုင်းလိုက်ရာ လျှာလေးတစ်လစ်နှင့် သူ့ဘ၀သူသိကာ အမြီးကုပ်ပီး နောက်နားသိူ့သွားကာ ဂိုးမပေးရအောင်ကာကွယ်ရ ရှာသည်....ဘာကာ ကစားပုံမှာ ပိရိ သပ်ရပ်သေသပ်လွန်းလှသဖြင့် မန်ယူကစားများမှာ မည်သူ့ကို ဆရာခေါ်ရမှန်းမသိအောင် ယုန်တောင်ပြေး ခွေးမြောက်လိုက် ဗျူဟာနှင့် အရှက်တကွဲ အကျိူးနည်း မဖြစ်စေရန် နဖူးမှချွေး ခြေမ ကျအောင် ကျွဲလိုနွားလို လိုက်တားကြလေသည်ကို ကျွနုပ်မျက်စိနှင့် မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်လိုက်ရသည်။ ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကို နှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ရရှိထားသည့် မက်ဆီဆိုသည့် ကောင်လေးမှာ ပြိုင်ဘက်ကစားသမားများ ၀ိုင်းရ့ထားသည်းအထဲတွင် လိုသလို ကစားသွားနိုင်သည်မှာ ပြိူင်ပွဲနှင့်မတူပဲ အပျင်းပြေ ဘောလုံးဆင်းကစားနေသည်နှင့် တူနေပြန်လေသည်ကိုလည်း တွေ့ရပေသည်. ပွဲကစားချိန် 27 အရောက်တွင် ဘာကာသည် ဂိုးသွင်းချင်စိတ်ပေါက်လာသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ကွင်းလယ်မှ Xavi လှမ်းခင်းပေးသည်ကို Pedro မှ နောက်တန်းနှင့် ဂိုးသမားကြားမှ ထောင့်ထဲသို့ အပျင်းပြေကန်သွင်းလိုက်ရာ ဘာကာတို့ ချန်ပီယံနမိတ် စဖိတ်လေပြီကို အကျွနုပ် အနည်းငယ်တော့ သတိချပ်မိလိုက်သည်။ သည်လိုနှင့် ပျင်းသလိုရှိလာသည်နှင့် ဘာကာတို့ဟိုပေးဒီပေးလုပ်နေခိုက် မန်ယူတို့ ခြေထောက်ထဲ ဘောလုံးတစ်ခါရောက်သွားသည်ကို အယောင်တကူး(အရူးတစ်ကောင်) အကွက်နှင့် မျောက်လိုလို အကောင်သည် လူကျွ့ဘောကို မသိချင်ယောင်ဆောင်ကာ ကန်လိုက်သဖြင့် အိပ်နေသည့်ကျားကို တစ်ဖန်ပြန်အသက်သွင်းလိုက်ပြန်သည်. သည်လိုနှင့် ပထမပိုင်း ပီးဆုံးသွားခဲ့ပီဖြစ်သည်။
ဒုတိယပိုင်း ဘာကာတို့ ခြေထောက်ထဲ ကော်တွေများကပ်နေသလားဟု ထင်ရလောက်အောင် ဘောလုံးသည် ဘာကာကစားသမားများခြေထောက်ထဲမှာတင် တ၀ဲလည်လည်နှင့် နေနေရှာသည်။ မန်ယူကစားများ လည်း ကွင်းထဲရောက်မှတော့ ပြန်ထွက်ရင် ရှက်စရာကြီးဟုတွေးကာ မသိချင်ယောင်ဆောင်ကာ လိုက်လုရှာသည်....သို့သော် ချန်ပီယံခြေထောက် မြေမှာထောက်သည်နှင့် ဗန်ဒါသီး အတွက် ဆေးခပ်ထားတဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်ထက်ခါးသည့်အရသာ ကို ကိုကိုမက်ဆီက နောက်တန်းကြီးပေါကြီးနှစ်ယောက်ကြားမှာ တစ်ဆင့် ကန်သွင်းလိုက်ခြင်းက အော် ဒါကြေင့်လည်း ဒီကောင့်ကို အကောင်းဆုံးလို့ပြောတာပါလားဟု အကျွနုပ်သည် တစ်ကိုယ်တည်း တီးတိုးရေရွတ်မိလိုက်သည်။။။ မက်ဆီရဲ့အောင်ပွဲ မိုက်ပွဲတွေတောင်မနေနိုင် ကန်ချက်က လန်ထွက်နေတာပဲဟု ဆိုကာ မိုက်တွေကိုကန်လိုက်သည်။ မှောင်ဝင်ခြေထောက်လေ ဒီလောက်တော့ ရှိမှာပေါ့.....ဒါကိုမန်ယူက အလံဖြူမပြပဲ ကံမကူလည်း ဒိုင်ကူမှာပဲ အထင်နှင့် ဗလာစီယာ က မက်ဆီကို အတင်းဝင်တိုက်သည် ...ရသွားပါတယ် ...အ၀ါရောင်အနမ်းလေးတစ်ပွင့် သူ့နာမည်လေးနဲ့ပေါ့.......ဒီလိုနဲ့တစ်ခါပြန် မျှော်လင့်ချက်တွေ မပေးကြဖို့ ဘာကာနည်းပြစကား မြေ၀ယ်မကျနားထောင်တတ်တဲ့ သူ့တပည့်လေး David Villa က စပိန်ကိုယ်စားပြူ ဘာကာဖလားတစ်ခုကွဟု ဆိုကာ မန်ယူရဲ့ ဆယ်ပြားစေ့ဂိုးပေါက်ထဲ ဝေ့၀ဲကာဝင်သွားသည်က ပွဲတစ်ခုလုံးအဆုံးသတ် ပခုံးဖက်ပီးအောင်ပွဲခံနေလိုက်ကြတာ လယ်ပြင်မှာ ဆင်သွားသလို ထင်ရှားစွာ မြင်တွေ့လိုက်ရတော့ ကျွနူပ်စိတ်ထဲ အတော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်...အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မျောက်သေကို ကြိုးတုတ်ရိုက်သလိုဖြစ်နေတော့ ကျွနုပ်လည်းစိတ်မကောင်းသည့် ဓာတ်ခံရှိသဖြင့် ကွန်ပျူတာပိတ် အိပ်စက်ရင်ပြင်ရလေတော့သည်...
ထိုကစားသည့်ပွဲတွင် မှတ်မှတ်ရရ မှတ်တမ်းဝင်သွားသူများမှာ
Lionel Messi---Man of the match 12ပွဲကစား 12ဂိုးသွင်း.
နာနီ--ဘောလုံး4ခါထိလိုက်ရသည်
ချာချာပါတီ--ဘောလုံး 4ခါထိ.2 ခါလူကျွ့ 1 ခါဘေးထွက် 1ခါပျက်
မန်ယူပရိသတ်များ အကျနုပ်အားချစ်ခင်ကျလေကုန်.... :P
Posted by ကိုထွဋ် at Sunday, May 29, 2011
ချံပီယန်လိ ဖိုင်နယ်ရောက်မလာကြကုန်သော ပရီမီးယားလိ၊လာလီဂါနှင့်စီးသီးအေ မှ အသင်းပိတ်သက်များပျော်ကြပါကုန်လော့.....:)))
နော်က ဘာကာကို ကြိုက်တော့ ကောင်းတယ်လို့ပြောရမည်ပင်။ သို့သော် အသည်းစွဲကြိုက်ခြင်းတော့ မဟုတ်။ မဖြစ်မနေအကြိုက်ဆုံးတစ်သင်းရွေးပါဆိုလျှင် ဘာကာ မှ ဘာကာ။
တစ်ကယ်ပဲ ဘာကာနိုင်လို့ ပျော်တာမှ အရမ်းးး:)
လွဲချက်ကယ်နာ ( အပိုင်း -၁)